Man United oo Real Madrid kala wareegtay kooxda dunida ugu dhaqaalaha badan , Yaa kujira 5-ta sare?
Thursday, January 24th, 2019 - 09:25:50
Tuesday January 23, 2018 - 11:53:07 in Wararka by Hussein Hadafow
Manchester United ayaa marki 10-aad taariikhda loo magacabay kooxda ugu dhaqaalaha badan dunida kubadad cagta kadib markii ay kaalinta kowaad kusoo baday xilli ciyaareedki 2016-17 markii ay soo xeraysay dhaqaalo dhan €676 milyan oo Euro taasoo u dhiganta (£581milyan oo ginni).
Uefa ayaa Man United ku abaalmariysay €44.5m markii ay ku guuleysatay koobka uefa Eurpoa League , taasoo ahayd lacag far jibbaar kabadan lacagtii ay Athltico Madrid heshay 2011-2012 taasoo ku filnedyin ay Real kaalinta labaad u tuurto.
Kooxda camaaliqada Spain Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalka Spain , La liga, Koobka horyalada kooxaha Yurub ( Uefa Champions league) Koobka kooxaha Dunida, Club Fifa World Cup ) waxaana usoo xarootay dhaqaalo dhan €674.6m (£579.7m) taasoo aan ku filnaan in ay United booska koowad ka galaan.
Barcelona ayaa kaalinta saddexaad soo gashay €648.3m (£557.1m), ayeey gacanta kud higtay , halka Bayern Munich afarad soo ciriirsatay ay heshay (€587.8m/505.1m), iyo Manchester City heshay (€527.7m/£453.5m) si ay u dhammeystirto booska shannaad.
Marka laysu geeyo kooxaha 20-ka ee horyaaalka Igiriiska ka dheela, waxay heleen €3.8 bilyan xilli ciyaareedki 2016-17.,waana rikoodh u gaara Premier league-ga waxaana liiska 20 koox soo galay Talyaaniga , Spain iyo Germany oo min 3 koox ku leh, iyo hal koox oo Fracne ka socota, taasoo ka dhigan in horyaalka ingiriiska 10 koox ku leeyahay.